२३ वर्षे युवतीको यो अवस्था भयो ‘जिरो फिगर’ बनाउन खोज्दा (भिडीयो हेर्नुहोस) - " सुलभ खबर "
एजेन्सी – धेरै युवतीलाई स्लिम बन्ने चक्करमा हुन्छन् । तर स्लिम बन्ने चक्करमा तपाई डाइटिङमा लाग्दा ज्यान नै जोखिम मै पर्ने खतरा हुनसक्छ । यस्तै डाइटिङको चक्करमा लागेर स्लीम बन्न खोज्दा अमेरिकाको न्युयोर्ककी स्टेफनी रोड्जले अत्याधिक डाइटिङ गर्दै जाँदा उनको स्वास्थ्यमा निकै ठूलो समस्या देखियो ।
स्टेफनी रोड्ज १३ वर्षकी हुँदा धेरै मोटी भएका कारण उनी र उनको परिवार नै चिन्तामा डुब्यो । त्यसपछि उनले लहडमै डाइटिङ शुरु गरिन् र खाना नखाने रोगमा परिणत भएपछि अहिले २३ वर्षकी हुँदा जम्मा २४ किलो तौल भएपछि अस्पताल नै भर्ना हुनुपरेको छ ।
लगातारको डाइटिङ धेरै वर्षपछि रोकेपनि उनको दुब्लो हुने क्रम नरोकिएपछि ठूलो समस्या देखियो । पछिल्ला दिनमा स्टेफनीलाई उदाहरण दिएर चिकित्सकहरूले डाइटिङ गर्दा हुने नोक्सानीका बारेमा मानिसहरूलाई सचेत गराउने गरेका छन् ।
तपाइले बट्टाईको अण्डा खानु भएको छ ? यस्ता रोगको लागि अचुक ओखती हो
फेसबुकबाट मायामा लठ्ठै पार्ने ‘सुन्दरी’ त पुरुष पो रहेछन्!
बदलियो ‘बाराक’ को रूप ,शरीरबाट ३५ किलो उन निकालियो(फोटो सहीत)